अनौठो संसार | Indrenionline.com | Page 3
बाँदर समात्नेलाई जागीर पक्का
एजेन्सी । पछिल्लो समय नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका कयौं देशमा बेरोजगारी जनसङ्ख्या बढिरहेको छ । नियमित तलब पाइने जस्तो भए पनि काम गर्नु हुन्थ्यो भनेर कयौं मानिस काम खोजिरहेका छन् । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा भने बाँदर समातेर बुझाउनेलाई जागीर दिने घोषणा गरिएको छ । भारतको राजधानी दिल्लीस्थित दक्षिण दिल्ली नगर निगमले बाँदर समात्नेका लागि भने ‘मङ्की क्याचर’ पदकै सृजना ...
कुकुर अपहरण गरेर १० लाख फिरौती
समान्यतया हामीले कुनै व्यक्तिको अपहरण गरेर फिरौती मागेको सुनेका छौं । तर कुकुरको अपहरण गरेर फिरौती मागेको सुनेका छैनौं । तर यस्तो पनि भएको छ । अपहरण गर्ने र फिरौती माग्न पल्केकाको एक समूहले कुकुरको अपहरण गरेर उसको मालिकसँग दश लाखको बार्गेनिङ गरेका छन् । जोय ब्रोचेरटको घरपालुवा कुकुर ७ डिसेम्बरदेखि वेपत्ता भएको थियो । धेरै खोजी गरेपछि जब कुकुर ...
पेटको बच्चा चोर्न गर्भवती महिलाको अपहरण
कस्ता कस्ता घटना हुन्छन् । सुन्दा पनि अच्चमा लाग्ने । कुनै कुनै घटना सन्दा पनि सत्य हौइनन् कि जस्तो लाग्छ । त्यस्तै ब्राजिल पनि नपत्याउदो घटना भएको छ । एजेन्सीहरुका अनुसार ब्राजिलमा हालै एउटा यस्तो घटना भयो, जुन घटनाले मानिस कतिसम्म क्रुर र आततायी बन्दैछन भन्ने देखाउँछ । त्यहाँका एक निःसन्तान दम्पतीले एउटी गर्भवती महिलालाई अपहरण गरेर उनको पेटबाट बच्चा ...
जहाँ बेहुलाका साथीले दुलहीका लुगा फुकालेर नंग्याउँछन्
विश्वमा बिहेका रोचक रोचक चलन मौजूद छन् । बिहेपछि निभाइने संस्कारहरु पनि झनै अनौठा हुन्छन् । यहीँ मेलोमा चीनमा एउटा यस्तो बिहे संस्कार छ, जसको बारेमा जान्नुभयो भने तपाइँ तिनछक पर्नुहुन्छ । सोसल मिडियामा एउटा यस्तै बिहे संस्कारको भिडियो भाइरल बनेको छ । भर्खरै बिहे गरेर घर भित्रिएका बेहुला बेहुली सुत्ने ओछ्यानमै पुगेर बेहुलाका साथीहरुले बेहुलीका शरीरका लुगा फुकालिदिएका छन् ...
चार वर्षमा वर्षमा ४३ हजार पटक बलात्कार
गएको वर्ष मानव तस्करहरुले फसाएकी २४ वर्षकी एक युवतीले निकै डरलाग्दो खुलासा गरिन् । मेक्सिकोकी कार्ला ज्यासिन्टो नामक ती युवतीका अनुसार उनीमाथि ४ वर्षको अवधिमा ४३ हजार पटक बलात्कार भयो । त्यो भयंकर कालरात्रीबाट उम्किएर अहिले उनी मानवअधिकारवादी बनेकी छिन् र विश्वभरका यौनहिंसा पीडित महिलाहरुलाई सहयोग गरिरहेकी छिन् । सन् २००८ मा मानव तस्करी विरुद्धको अपरेशनका दौरान वेश्यालयबाट कार्लाको उद्धार ...
वैवाहिक समारोहमै दुुलाह-दुलहीलाई सेक्स गर्न लगाएपछि………..
यौनसम्वन्ध कुनै पनि श्रीमान(श्रीमतीको नितान्त निजी मामला हो । नवविवाहित जोडी त झन लजाउने नै भए । तर, यदि कुनै नविवाहित जोडीलाई सबैको अगाडी खुल्ला यौनसम्वन्ध राख्न लगाइयो भने ? चीनमा यस्तै घटना भएको छ । केही समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियोमा एक नवविवाहित जोडीलाई पाहुनाहरुले खुल्ला यौनसम्वन्ध राख्न वाध्य पारेको देख्न सकिन्छ । दुई मिनेटको भिडियो क्लिपको ...
सन्थाल जातिको वाध्यता: छाक टार्न मुसाको सिकार
मोरङ, २१ मंसिर । मोरङ जिल्लाको पथरी शनिश्चरेमा सन्थाल जातिहरु मुसालाई मारेर तरकारीको रुपमा छाक टार्ने गर्दछन् । सन्थालहरु मुसाको मासु तरकारीको रुपमा खाने गर्छन् । मुसालाई आहार बनाउनकै लागि धेरै मेहनत गर्छन् । परम्पराकै रुपमा ती समुदायले मुसाको सिकार गर्छन् । सीमान्तकृत तथा अति विपन्न समुदायका मानिस मासु खाने प्रयोजनका लागि मुसाको सिकार गरेर तरकारीको गर्जो टार्ने गरेको पाइन्छ ...
पुरुषका लागि पनि गर्भनिरोधक सुई
पुरुषका लागि गर्भनिरोधक सुईको परिक्षण गरिएको छ । जर्नल अफ क्लिनिकल एन्ड्रोक्राइनोलोजी एण्ड मेटाबोलिजममा छापिएको अनुसन्धानका अनुसार पुरुषमा हार्मोन इन्जेक्सनको प्रयोग सफल तथा प्रभावकारी पाइएको हो । अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताले २ सय ७० जना पुरुषमा हार्मोन इन्जेक्सनको प्रयोग गरेका थिए जसमा जम्मा ४ जनाका श्रीमतीले मात्रै अनुसन्धानका क्रममा गर्भधारण गरेका थिए । यस इन्जेक्सनलाई ९६ प्रतिशत प्रभावकारी मानिएको छ । विगत ...
क्यामराको अगाडि सेक्स गर्ने जोडीलाई कलेजले दिनेछ पैसा, तर …
भलै तपाइँलाई सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला तर यो सही साँचो कुरा हो । अब जो सुकै जोडीले क्यामराको अगाडि यौन सम्पर्क गर्न राजी हुन्छन् उनीहरुलाई विश्वविद्यालयले निश्चित रकम प्रदान गर्नेछ । आखिर यसरी दुनियालाई क्यामराको अगाडि सेक्स गराएर पैसा तिर्नुमा विश्वविद्यालयको के स्वार्थ छ होला ? अनि यस्तो विश्वविद्यालय कुन देशको होला ? बेलायतको कोवेन्ट्री युनिभर्सिटीले यस्तो घोषणा गरेको हो । ...